Paragoay: Niainga Tamin’ny Asa An-tery Vaimanta, Lasa Mpitarika Ny Teratany · Global Voices teny Malagasy
Paragoay: Niainga Tamin'ny Asa An-tery Vaimanta, Lasa Mpitarika Ny Teratany
Voadika ny 12 Aogositra 2012 1:06 GMT
Vakio amin'ny teny বাংলা, Français, Swahili, Español, русский, Português, English
Fony mbola dimy taona i Margarita Mbywangi dia nesorina teo anatrehan'ireo ray sy reniny ary namidy im-betsaka ho mpiasa an-trano tsy araka ny sitrapony tany amin'ny tranon'ireo Paragoaiana sangany. Zavatra niarahan'ny maro amin'ireo teratany Aché niainana io any Paragoay nandritra ny fitondrana jadon'i Alfredo Stroessner (1954-1989). Ireny fomba fanao ireny dia làlana nahafahan'ireo mpanan-tany nanilika ireo Aché hiala ny tany navelan'ny razany sy naka ny tanin-dry zareo. Vokatr'ireny fakàna an-keriny ireny, marobe ireo tanora Aché no niaina lavitry ny tranon-dray aman-dreniny sy lavitry ny fototra maha-teratany azy.
Mbywangi dia mandray anjara aminà tetikasa Rising Voices amin'izao fotoana, ny Aché djawu (Ny Tontolo Aché ) [es], ary tsy ela akory izay dia nanoratra izy lahatsoratra fohy tanaty bilaogy [es] mikasika ny fiainany :
Izaho, Mbywangi, dia nilazàna fa teraka tany [aminà vondrom-piarahamonin'i] Kuetuvy tamin'ny 1962. Fony aho dimy taona, nangalarina tamin-dreniko aho nandritra ny fotoanan'ny jadona. Lehibe tao aminà fianakaviana Paragoaiana iray aho mandra-pahafenoko ho 16 taona. Ary tamin'ny 1980, rehefa feno 20 taona, niverina tay amin'ireo fianakaviako Aché aho, any amin'ny vondrom-piarahamonin'i Chupapou. Tsy afaka nahita intsony ireo nahitako masoandro aho. Fa kosa mba afaka nahita ireo anadahiko.
Rehefa tafaverina an-tany niaviana i Mbywangi nony farany, tany amin'ny fiandohan'ny 1980 tany, dia nanjary mpanampy mpitsabo, na infirmière, sy koa lasa renim-pianakaviana. Manohy izy ao amin'ny lahatsorany ao amin'ny bilaogy :
Tamin'ny 1981, niteraka ny zanako voalohany aho ary niteny tamin'ny tenako hoe, manana namana aho izao ary nahatsiaro fahafenoana aho tamin'izay andro izay. Nandany taona maro nanabe ny zanako lahy aho sady nikarakara ny fahasalaman'ny olona tao amin'ny vondrom-piarahamonina nisy ahy.
Kanefa, tao anatin'ireo am-polotaona maro nifandimby dia lasa mavitrika kokoa amin'ny ara-politika ho fiarovana ny zon'ireo teratany izy. Efa nirotsaka indray mandeha hofidiana ho loholona Paragoaiana izy ary efa naiditra am-ponja mihitsy noho ny andraikitra noraisiny tamin'ireo hetsi-panoherana ho fiarovana ireo tahiry voajanahary noho ny fikapàna tsy ara-dalàna[es]. Tamin'ny 2008, naharay fanasàna avy amin'ny fitantànana teo aloha i Mbywangi, ny fitantanan'ny filoha President Fernando Lugo mba ho Minisitra Misahana ny Raharaan'ireo Teratany. Izy no mpikambana voalohany avy amin'ny vondrom-piarahamonina teratany nitàna izany toerana izany.
Amin'ny maha-ao anatin'ny tetikasa Rising Voices azy, nanomboka nampiasa ny bilaogy itambaram-be i Mbywangi mba hizaràna ny zavatra niainany. Nanokatra kaonty Twitter ihany koa izy, (@MargaMbywangi), saingy mbola an-dàlana mizatra ny manavao matetika azy io hatrany aloha hatreto. Ao anatin'ity lahatsary ity, miresaka izy mikasika ny maha-zava-dehibe ny fizaràna ny tantarany amin'ireo vondrom-piarahamonina teratany hafa sy mivelatra amin'izao tontolo izao.
Ny lahatsorany am-bilaogy dia nakatony tamin'ny fanazavana ny anarany araka ny fomban-drazana Aché :
Tiako ery rehefa miantso ahy hoe Mbywangi ry zareo satria izay no anarana nomen'ilay reny niteraka ahy ho ahy, ary ny Margarita dia anarana nomen'ilay reniko faharoa, na dia tsy isan'izay zanaka vaviny aza no nandraisany ahy. Manana ny anarako fotsiny aho, ary mahatsiaro faly amin'ireo anarana roa ananako ireo.